Global Ransomware Attack - Semalt Expert Anotsanangura Nzira Yokudzivirira Nayo
Kushandurwa kweCyber ​​kwakakanganisa mazana emakombiyuta munyika dzinopfuura 160 panguva yevhiki imwe chete yaJanuary gore rino. Kunze kwekuti, vanhu nemasangano vachiri kunetseka nokuda kwekutya kusazivikanwa.
Oliver King, Mutengi Wekugutsikana Kwevateresi Semalt , anopa dzimwe nyaya dzinobatsira kudzivirira kurwisa kwakaipisisa.
Bhizimisi dzakabatwa nerudzikinuro rwaisanganisira FedEx uye National Health Service iyo yakakundwa neWannaCry (inozivikanwawo seWannaCrypt, Wanna DecryptOr kana WCry). Purogiramu yakaipa WCry yakashandisa kuchengetedzwa kwekuchengetedza muWindows XP OS (Operating System) pamakombiyuta evanhu (PCs). Uyezve, iyi yekununura yakavhara mafaira pamakombiyuta uye inoda kubhadharwa usati wasvhura makombiyuta disks - coil for o2pur. Kakawanda, vashandi vanokumbira zvipo kuburikidza ne bitcoin, mari yakafanana yemadhijita.
Pasinei neMicrosoft kutumira kugadzirisa, zviremera zvepaIndaneti zvinoramba zvichirondedzera nezvekuwedzera kwekudzivirira rudzikinuro. Zvechokwadi, iyo mhizha inofanirwa ichitaura kuti hurongwa hwekudzivirira hutachiona uye hutachiona huri kuramba huchipararira kuzviuru zvemakombiyuta apo vashandi vari kupinda munyika yose.
Kazhinji, iyo malware inowanikwa nenzira yechinyorwa che email. Apo unoshandisa internet anotengesa pachikwata chinowanikwa mu email kana kuzarura chibatanidza, purogiramu inomhanya uye inoiswa pa kombiyuta. Pakutanga, shoko re email rinogona kunge risingaiti nengozi nokuti mutumi anogona kunge ari mubhuku rekero remugamuchira.
WannaCry encrypts zvose zvinyorwa uye mafaira pamakombiyuta zvakadai zvokuti musikana haakwanisi kuwanika zvakare. Kazhinji, mharidzo yepop-up inotevera iyo inoratidza" Kushamiswa, mafaira ako akaiswa. "Munhu anoshandiswa anobva apiwa nguva yekudzorera rudzikinuro rwe $ 400 kusvika ku $ 600 kana kupfuura." Maererano nevanodzidza nezvekuchengeteka kwe-cyber, kubhadhara kwekuregererwa hakusi chigadziro chekugadzirisa.Kushure kwezvose, mumwe ari kutarisana nemhosva dzepaneti.
Muparidzi weCodeCamp uye software engineer, Quincy Larson akaudza vatori venhau vaAcc kuti rudzikinuro runobata vashandisi pavanowana maimeri kana mamwe marudzi emashoko anotoda mushumiri kuti adzidze uye aise mafaira. Apo mafaira akadaro anotamba pamakombiyuta emunhu, vanyengeri vanovhara dhirairi rakaoma kana zvikamu zvaro zvakadai kuti chipfuuri ichi chinoramba chichishanda asi mafaira akachengetwa haagoni kuwanika nemushandisi.
Larson akaudzawo ABC kuti nzira yakanakisisa yekudzivirira ransomware scams ndeyekuita kuti shanduro yekombiyuta isati yakwana. Uyezve, vashandisi vanofanira kuvandudza zvishandiso zvekombiyuta.
Pakupedzisira, vashandisi vanogona kuwana dzimwe nzira nhatu dzekudzivirira makombiyuta avo kurwisa malware muchikamu chinotevera chechinyorwa. Dzinosanganisira:
1. Vashandi vekombiyuta nevashandisi vanofanira kuvandudza mazera ekare e MS (Microsoft) maitiro ekushanda akadai seWindows XP kana Vista mumashanduro emazuva ano kupedzisira achinetseka kupesana. Microsoft inoshandura mazano anogona kuwanika panzvimbo yepamutemo yekambani yega yega. Nokudaro, vashandisi vanofanira kutora chero shanduro yezvino ye software kana kambani ichivabudisa.
2. Mafaira eWashandi anofanira kuenderedzwa kure kure mumotokari dzisingabatanidzi kuInternet network. Mushandi saizvozvo haazogoni kuoma zvakasimba mushure mekudzikinurwa kwehurumende nokuti vanogona kuwana mahwendefa avo kubva kumitambo yekunze.
3. Dzivisa kuvhara zvinyorwa zvinyunyuta kana zvisingabatsiri. Uyezve, vashandisi vanofanira kuverenga maitiro asati adzingwa nekuisa zvirongwa.